အိုင်ဖုန်းက မမာဘူး - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited September 2009 in iPhone
iPhone မှာ Tough Screen က Senser သိပ်မကောင်းဘူး....အသစ်ကြီးပါ..ဆိုင်ပြန်ပို ့ခိုင်းနဲ ့နော်...
အဲဒါဘာကြောင် ့ဖြစ်နိုင်မလည်း....Senser မကောင်းလို့ဖုန်းအ၀င်မှာ အရမ်းကို လက်ညှိုးနဲ ့ဖိပြီး Accept ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်..နှစ်ခါသုံးခါမရတော့တစ်အားစိတ်တိုတာနဲ့အားကုန်ထောက်လိုက်ရော... နောက်ဆုံးတော ့စကရင်ကွဲသွားလေသတည်းပေါ ့....:((၅ ပတ်လောက်ပဲကြာဥိးမယ်.....:39:
မှတ်ချက် .... ဖုန်း ၃ ခါထက်မနည်း အောက်ကိုပြုတ်ကျဖူးပါတယ်...
ဆန်ဆာပါတဲ့တော့စက၇င် တွေက ထိလို့တို ့လို့အ၇မ်းလွယ်တယ်..... အိုင်ဖုန်းတော့နည်းနည်းခက်တယ်....ဆန်ဆာသိပ်မကောင်းဘူးလို ့မြင်မိပါတယ်.. ဖ၇န် ့တွေလည်း ၀ိုင်း၀န်းအဖြေရှာပေးကြပါ..
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ monkey ရယ် . နောက်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်သတုန်း
ဖုန်း ၃ ခါထက်မနည်း အောက်ကိုပြုတ်ကျဖူးတယ် ဆိုတော့ ကာ သေချာနေပြီ :103:
thuthuaunggyi wrote: »
နောက်ဆုံးတော ့ဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူး...အိမ်မှာပဲသိမ်းထားပါတယ်...ဆိုင်လည်းပြန်မပို ့ချင်ဘူး... စကရင် ကွဲသွားတာဆိုတော့စျေးကြီးမှာစိုးလို ့....
နောက်ပြီပြောဖို ့ကျန်သွားလို ့.. ဘက်ထရီအားအရမ်းစားပါတယ်....အားအပြည် ့သွင်းထားတာတောင် တစ်နေကုန် သီချင်းနားထောင်လို ့မရဘူး.. Game လည်းကြာကြာကစားလို ့မရပါဘူး...:2:
iphone အတုေတွေရှိပါတယ်.. တရုပ်ကလာတာပါ..။ Touch Screen ထဲမှာတော့ HTC ကကောင်းပိုကောင်းပါတယ်..။ LG ကတော့ကျွန်တော့အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ..:67: camera လဲကောင်းလို့ပါ..။ 8 mgp နော်..display ကလဲ 480 X 800..ဗျ.။ ဒီဇိုင်းကတော့ နဲနဲအောက်တယ်..ဗျာ။ iphone ကိုဖိုက်ထားတယ်ပြောပြီးတော့..:2: ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာကြည့်ဗျာ။
iphone က အတုရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး အခုနောက်ပိုင်း iphone တွေက USA အစစ်တွေက ဒီဘက်ကိုမလာဘူးလို့ထင်တာဘဲ အခုနောက်ပိုင်း
ထိုးင်း ရယ် ဟောင်ကောင်တို့ကလဲ iphone ကိုထုတ်ကြတယ်...ဒါပေမဲ့ နဲနဲခြင်းဆီကွာသွားတယ် ကျနော်လဲသေချာမသိပါဘူးှဗျာ...
iphone ရဲ့ touch screen က sensitivity အရမ်းကောင်းလို့ annoy တောင်ဖြစ်လောက်ပါတယ်။ Touch screen တွေထဲမှာ sensitivity အကောင်းဆုံးက iphone ပါ။ China iphone ကတော့ size မှာ မသိမသာလေးပိုထူတယ်။ Touch က sensitivity မကောင်းဘူး။ Unlock slider တောင်တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်နဲ့ဆွဲလို့ အဆုံးထိမပါဘူး။ Slide တွေဆွဲရင၊် multi touch နဲ့ zoom in / zoom out လုပ်ရင် တော်တော်သိသာပါတယ်။ ဒီတိုင်း touch မှာမသိသာပေမယ့် slide မှာတောင်သိသာတယ်။
HTC က UI တွေကောင်းလာတယ်။ နောက်ဆုံး HTC hero ရဲ့ Teflon coated touch screen တောင် iphone လောက် sensitivity မကောင်းဘူးဗျ။ ဘယ်က ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာလည်းဗျာ။ Sensitivity မကောင်းဘူးဆိုတော့ China များဖြစ်နေမလား။ နောက်ပြီး China iphone က battery ပိုမြန်မြန်ကုန်တတ်လို့။
( ကိုမျိုးကျော်ရေ LG က windows mobile လားဗျ ? iphone ကိုအနီးစပ်ဆုံး စိန်ခေါ်နိုင်တာဆို HTC Hero ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ Multi touch မရတာနဲ့တင် Windows mobile က ဂန့်နေပါပြီ။ HTC မှာတောင် Hero က Daimond ထက်မိုက်တယ်ဗျ။ လဲလိုက်ဗျာ :P:P)
Note: ဒါရေးနေတုန်း Singtel online shop သွားကြည့်တာ Hero stock ပြန်ရောက်ပြီဗျ။ အရင် iFlexi plan နဲ့ 198S$ အခု 398S$
တိဘူးရေ တားရဲ.. LG ကပြောတာကိုပြန်ပြောတာလေ..နောက်နဲ့ဘရားသားရ..၀ယ်ထားတာ ၂ပတ်ဘဲရှိသေးတယ်..ခုထိတော့ လက်ရှိသုံးနေတာလေးကိုကြိုက်တယ်..။ camera သီးသန့်မဆောင်ချင်လို့ camera လည်းကောင်းတဲ့ဒါလေးကိုရွှေးလိုက်တာဗျ..။ ကို Divinity အညွန်းကောင်းရင်တော့ star hub ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ဦးမယ်ဗျာ..။
Myok wrote: »
Hero လည်း 5.0 Mega pixel ပါဗျ။ Flash light တော့မပါဘူးဘူး။ Design က ကောက်ကောက်လေးဖြစ်နေတာပဲရှိတယ် :P Unique design ပေါ့ဗျာ ။ :P:P
Windows mobile မှာ Windows media player က call hang up လုပ်ပြီးရင် music resume ဆက်လုပ်တာကို တစ်နေရာမှာ မျောက် ရေးထားတာတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Windows mobile မှာ အဲဒိ Windows media player ကြီးကို background ပို့ပြီး သုံးလို့ရဘူးနော်။ ပိတ်လိုက်ရင် ပိတ်သွားရော။ သီချင်းနားထောင်ရင်း email စစ်ချင်ရင် မရဘူး။ Android မှာတော့ Workspace တွေအများကြီးပါတယ်။ Linux ဆိုတော့ workspace တစ်ခုမှာ music play နောက်တစ်ခုမှာ တခြား Apps ကိုသုံး နေလို့ရတယ်။ iphone လို jailbreak စရာလည်းမလိုဘူး Linux သုံးတက်ရင် console ကနေ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရတယ်။ UI လည်းမိုက်တယ်ဗျ။ စျေးတက်သွားတာ တစ်ခုပဲ မမိုက်တာ :67::67:
ဖတ်မိသလောက် တော့မျောက်နဲ့ အိုင်ဖုန်းနဲ့မတည့်ဘူးထင်တယ်... :d:d:d 5ပတ်အတွင်းမှာ3 ခါ ထက်မနည်း ပြုတ်ကျ တယ်ဆိုတာ ကားပေါ်ကလား.... အိမ်ပေါ်ကလား...(တိုက်ခန်း အမြင့်ပေါ်ကလား).... :d:d:d ပြုတ်ကျပြီးရင်တောင် အသားကုန် ဖိနှိပ်ပစ်တဲ့သဘောမှာရှိတယ် သေချာတာကတော့ အိုင်ဖုန်း သံတွေနဲ့လုပ်ထားရင်တောင် မျောက်နဲ့ နေရတာ မစားသာလှဘူး :p:p နောက်တာပါ မျောက်ရေ... အိုင်ဖုန်းအဖြစ်ကို တွေးကြည့်မိပြီး သနားလို့ပါ... :d:d:d
ကိုမျောက်ပျော်လေးက အတွင်းအားအရမ်းများနေလို့ထင်တယ် ။ friend ၀ယ်ထားတာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲ ။ iphone အတုရှိလားဆိုတော့ ပေါလွန်းလို့ ။ yuzana plaza အောက်ဆုံးထပ်မှာသွားကြည့် ပေါလွန်းလို့ . . . . . . . .
နဲနဲတော့ကြိုက်နေပြီဗျ...။ အကောက်ဒီဇိုင်းက screen မထိခိုက်အောင်လို့နဲ့ အသံဖမ်းအားကောင်းအောင်လို့ညွှန်းထားတယ်..။ ဒါပေမယ့် အညိုရောင်နဲ့ အဖြူဘဲကျန်တော့တယ်တဲ့..။ ဒီနေ့ Dhoby Ghaut ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်..။ သိပ်ကြိုက်သွားရင်တော့ ကိုDivinity တစ်၀က်စိုက်ရမယ်..ဒါပဲ..:14:..:)):))